Fampiharana - Shanghai Mingke Process Systems Co., Ltd.
Fehikibo vy ho an'ny mpanao fanaovan-gazety indroa
Hazo mifototra amin'ny tontonana fisaka fanerena tsipika famokarana mampiasa fehin-kibo roa sosona milina fanontam-pirinty, izay miasa amin'ny ambony sy ambany vy belts'continuous fandidiana.
Fehikibo vy ho an'ny Mende Press
Ny fehikibo vy ho an'ny mpanao fanaovan-gazety Mende dia mitondra fanerena be dia be, satria ny fehikibo dia mitondra adin-tsaina miondrika sy adin-tsaina mafana.
Ny fehikibo vy matanjaka marika Mingke dia mitana ny andraikitry ny singa fototra amin'ny rafitra automatique indostrialy maro.
Fehikibo vy ho an'ny Rotocure
Rotary Curing Machinery (Rotocure) dia fitaovana vulcanization amponga fingotra mitohy, manana fehikibo vy avo lenta mba hahatratrarana ny famokarana mitohy.
Fehikibo vy ho an'ny Vulcanizer Plate
Flate Vulcanizer dia fitaovana manokana ho an'ny vokatra vita amin'ny fingotra isan-karazany amin'ny famolavolana vulcanization, ny fanamafisana ny takelaka vy avo lenta, afaka manatsara ny kalitaon'ny vokatra, mampihena ny fatran'ny fanoloana.
Fehikibo vy ho an'ny Flaker mangatsiaka
Mingke Stainless Steel fehin-kibo manao tsara amin'ny harafesiny fanoherana, noho izany dia be ampiharina amin'ny simika indostrian'ny flaking milina mba hamokatra simika flakes ho coolant conveyor.
Fehikibo vy ho an'ny pastillator mangatsiaka
Ny fehin-kibo fampangatsiahana pastillator dia karazana fitaovana fanodinana granulation.Ny akora voarendrika dia milatsaka mitovy amin'ny fehikibo vy izay mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha mitovy.
Fehikibo vy ho an'ny lafaoro fanaova-mofo tonelina
Mingke Carbon Steel Belts dia ampiharina betsaka amin'ny indostrian'ny sakafo, toy ny lafaoro fanaova-mofo tonelina.Misy karazany telo ny lafaoro: lafaoro karazana fehikibo vy, lafaoro karazana fehikibo harato ary lafaoro karazana lovia.
Fehikibo vy ho an'ny famokarana sôkôla
Mingke Stainless Steel fehin-kibo dia be ampiharina amin'ny indostrian-tsakafo, toy ny tsipika famokarana sôkôla.
Fehikibo vy ho an'ny fitaovana fanariana sarimihetsika
Mingke sakafo hariva fitaratra voalambolambo fehikibo vy azo ampiasaina amin'ny fitaovana fanariana sarimihetsika.Film fanariana dia be mpampiasa amin'ny famokarana fonosana plastika sarimihetsika, sivana sarimihetsika sy Multi-miasa sarimihetsika plastika, fanasan-damba pods sy ny saha hafa.
Fehin-kibo Stainless Steel ho an'ny fanamboarana taratasy
Ny fehikibo vy Mingke dia azo ampiharina amin'ny indostrian'ny fanaovana taratasy ho an'ny milina fametahana taratasy.Amin'ny ankapobeny dia midadasika be ny fehikibo, mahatratra 9 metatra mahery ny sakany, raha manodidina ny 0.8mm ny hatevin'ny fehikibo.
Fehikibo vy ho an'ny fitiliana kodiarana fiara
Ny fehikibo vy Mingke dia azo ampiharina amin'ny indostrian'ny fiara ho an'ny fitsapana sy andrana, toy ny famakafakana ny tonelina rivotra, ny fitsapana kodiarana ary ny fizotran'ny famolavolana fiara.